ငယ်ငယ်ကတည်းက သူမစွဲလန်းခဲ့ရတဲ့သီချင်းလေးကို သီချင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ တေးသံရှင်ကြီးမေခလာနဲ့အတူပြန်လည်သီဆိုမယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းမြတ်သူ – Cele Top Stars
ငယ်ငယ်ကတည်းက သူမစွဲလန်းခဲ့ရတဲ့သီချင်းလေးကို သီချင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ တေးသံရှင်ကြီးမေခလာနဲ့အတူပြန်လည်သီဆိုမယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းမြတ်သူ
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ ယွန်းမြတ်သူ ကတော့လတ်တလောမှာ ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းအစားဆုံး သီချင်းရဲ့ပိုင်ရှင်လို့ဆိုရမှာပါ။ ပထမCovidကာလမှာလည်း သူမရဲ့အဆင်ပြေမနေပါဘူးသီချင်းဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အခုဒုတိယ Covidကာလမှာဆိုရင်လည်း သီချင်းမထွက် ရသေးပေမယ့်သူမရဲ့ ”နင်လမ်းတွေ့ခဲ့ရင်”သီချင်းဟာ ပရိသတ်တွေပါးစပ်ဖျားနေရာ ယူထားခဲ့တဲ့သီချင်းဖြစ်ခဲ့တာပါ….။
လက်တလောမှာလည်းအသစ်စက်စက်ထွက်ရှိထားတဲ့𝘽𝙍𝘼𝙄𝙉𝙇𝙀𝙎𝙎 Music Video လေးကလည်း ပရိသတ်ရင်ထဲကိုရောက်ရှိကာTikTokမှာလည်းလူအများကြိုက်နှစ်သက်ကာ ဆော့ကစားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာသီချင်းသစ်တွေထပ်မံထွက်ရှိမယ့် ယွန်းမြတ်သူကတော့ ပြည်သူချစ် အဆိုတော်ကြီး မေခလာထံသို့ပြန်လည်သီဆိုချင်တဲ့သီချင်းလေး အတွက်သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်…။
“တေးရေး တေးဆိုဗျတ္တ အသံအားကောင်းတဲ့သမီး ယွန်းမြတ်သူ ချစ်ငယ်အိမ်မှာ တွေ့ကြ ဆုံကြ စကားတွေပြောကြတယ်သမီးယွန်းမြတ်သူ ငယ်ငယ်ထဲကစွဲလန်းခဲ့တဲ့ချစ်ငယ်သီချင်းလေးတပုဒ်ရှိတယ်တဲ့ 😘အတူဆိုချင်တဲ့ သီချင်းလေးနာမည် ဘာဖြစ်မလဲ ချစ်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်😘ခု့တော့ ပြောပြသေးဘူး ချစ်ငယ်စိတ်ပေါ့ပါး တဲ့ချိန်ကျ ပြောပြမယ်နော် ❤️”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ချစ်ငယ်အကောင့်က တင်လာခဲ့တဲ့အပြင် ယွန်းမြတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း”အန်တီချစ်ငယ်နဲ့ တူတူ ပြန်ဖန်တီးမယ့် သီချင်းလေးက ဘယ်သီချင်းလေးဖစ်မလဲ? ❤️ဆိူပြီး ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုေ မးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေလာ်းခန့်မှန်းခဲ့ကြပါဦးနော်…။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ ယှနျးမွတျသူ ကတော့လတျတလောမှာ ပရိသတျပါးစပျဖြားမှာရပေနျးအစားဆုံး သီခငျြးရဲ့ပိုငျရှငျလို့ဆိုရမှာပါ။ ပထမCovidကာလမှာလညျး သူမရဲ့အဆငျပွမေနပေါဘူးသီခငျြးဟာ ပရိသတျတှအေတှကျ ရပေနျးစားခဲ့ပွီး အခုဒုတိယ Covidကာလမှာဆိုရငျလညျး သီခငျြးမထှကျ ရသေးပမေယျ့သူမရဲ့ ”နငျလမျးတှခေဲ့ရငျ”သီခငျြးဟာ ပရိသတျတှပေါးစပျဖြားနရော ယူထားခဲ့တဲ့သီခငျြးဖွဈခဲ့တာပါ….။
လကျတလောမှာလညျးအသဈစကျစကျထှကျရှိထားတဲ့𝘽𝙍𝘼𝙄𝙉𝙇𝙀𝙎𝙎 Music Video လေးကလညျး ပရိသတျရငျထဲကိုရောကျရှိကာTikTokမှာလညျးလူအမြားကွိုကျနှဈသကျကာ ဆော့ကစားနတောတှရေ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး အနုပညာသီခငျြးသဈတှထေပျမံထှကျရှိမယျ့ ယှနျးမွတျသူကတော့ ပွညျသူခဈြ အဆိုတျောကွီး မခေလာထံသို့ပွနျလညျသီဆိုခငျြတဲ့သီခငျြးလေး အတှကျသှားရောကျခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ…။
“တေးရေး တေးဆိုဗတ်ြတ အသံအားကောငျးတဲ့သမီး ယှနျးမွတျသူ ခဈြငယျအိမျမှာ တှကွေ့ ဆုံကွ စကားတှပွေောကွတယျသမီးယှနျးမွတျသူ ငယျငယျထဲကစှဲလနျးခဲ့တဲ့ခဈြငယျသီခငျြးလေးတပုဒျရှိတယျတဲ့ 😘အတူဆိုခငျြတဲ့ သီခငျြးလေးနာမညျ ဘာဖွဈမလဲ ခဈြတို့စဉျးစားကွညျ့လိုကျနျော😘ခု့တော့ ပွောပွသေးဘူး ခဈြငယျစိတျပေါ့ပါး တဲ့ခြိနျကြ ပွောပွမယျနျော ❤️”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ခဈြငယျအကောငျ့က တငျလာခဲ့တဲ့အပွငျ ယှနျးမွတျသူကိုယျတိုငျကလညျး”အနျတီခဈြငယျနဲ့ တူတူ ပွနျဖနျတီးမယျ့ သီခငျြးလေးက ဘယျသီခငျြးလေးဖဈမလဲ? ❤️ဆိူပွီး ခဈြတဲ့ပရိသတျတှကေိုေ မးခှနျးထုတျခဲ့တာပါ။ ပရိသတျတှလျေားခနျ့မှနျးခဲ့ကွပါဦးနျော…။
ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကြောင့်သမီးလေးနှစ်ယောက် စိတ်ဓာဏ်ရာရသွားကြတဲ့ အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
ခရစ္စမတ်အင်္ကျီလေးဝတ်ပြီး ဆော့ကစားနေတဲ့ အာကြီးရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ